सरकारले देशभक्ति अडान छोड्नुहुँदैन : रावल – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार ३१ मंगलवार, ०६:३८
२०७६ असार २२ गते प्रकाशित, l १३:०६
भीम रावल, नेता, नेकपा
सरकारले पछि हट्नु पर्दैन । विगतका अप्ठ्याराबाट मुक्ति पाइन्छ भनेर नेपाली जनताले हामीलाई दुई तिहाई बहुमत दिएका हुन । काम गर्न नसक्ने भए जनताले नेकपालाई किन मत दिनुपर्यो त ? विगतका अस्थिर सरकारले गरेन, कांग्रेसले गरेन, राणाले गरेन भनेर जनताले नेकपालाई मत दिएका हुन् नि । त्यसैले अहिलेको सरकारले देशभक्ति अडान छोड्नुहुँदैन । अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्बन्ध स्थापित गर्ने जुन अडान छ, त्यसले नेपालको हित गर्छ भनेर जनताले मत दिएका हुन् । देश र जनताको पक्षमा बोल्दा सरकारको विरोध गरेको भनिन्छ भने यो सरकारको औचित्य के ? जनताको मतको औचित्य के ?
तपाईले त आश्चर्यको कुरा गर्नुभयो । अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार, विश्व व्यापार संगठनअनुसार प्रत्येक देशले आफ्ना जनतालाई विषादीबाट बचाउनका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यो खालको सम्झौता पनि छ । नेपालबाट कुनै विषादीयुक्त वस्तु भारत जाँदा परीक्षण गर्नुपर्ने, भारतका जनतालाई जोगाउनुपर्ने, भारतबाट नेपाल आउने विषादी चाँही परीक्षण गर्न नपर्ने ? नेपाली जनता पनि विषादीबाट जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा दुई देशको सम्बन्ध विग्रन्छ भने विग्रियोस् । दुई देशबीच सम्बन्ध नै छैन भनिदिए पनि हुन्छ । जनतालाई विषादीबाट बचाउनुपर्छ भन्दा कुनै देश रिसाउँछ भने सम्बन्ध राम्रो भएको ठहर्छ त ?
तपाईले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति बारम्बार आलोचना गर्नुभएको छ । किन ?
मैले आलोचना र विरोध गरेको छैन । मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोध गरेँ भनेर जसले भनिरहेको छ, उनीहरु भ्रममा छन् । मैले देशभक्ति भावना र नेकपाको विधानअनुसार काम गरौँ भनेको हुँ । मेरो यो कुरालाई कतिपयले बङ्ग्याएर संविधानलाई मिच्ने, र नेकपाको विधानलाई असफल बनाउने षडयन्त्र गरिरहेका छन् । संविधान विपरित काम नगरौँ भन्दा विरोध गरेको ठान्ने हो भने त अब मनपरी गर्न छुट दिए भैहाल्यो नि । यस्तै हो त कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको विशेषता ? मैले जे भनिरहेको छु, त्यसले देश, जनता, सरकार र नेकपालाई फाइदा नै गरेको छ ।
२०७६ असार २२ गते सम्पादित l १५:४६
म भारत विरोधी होइन, तर नेपाली जनताको हितविपरित जान सक्दिन : रावल